Tamin'ny fotoan'ny Andro Iraisampirenena tsy fananan-kery sy ny fiandohan'ny volana martsa faharoa, mpianatra Alumni 2 an'ny IES Campiña Alta sy IES Juán García Valdemora, ary olon-dehibe 200 an'ny El Casar dia nanao Symbol de Nonviolence ho an'ny olombelona.
Nofariparitanay ny lohahevitry ny fampielezan-kevitrao, "Symbols of Peace and Nonviolence".
Heverinay fa tena mahaliana ny soso-kevitrao, ka izany no andefasanay aminao ny asanay miaraka amin'ireo mpianatra.
Ny hetsika "HUMAN SYMBOLS AND SABANA DE LA PAZ" dia novolavolaina niaraka tamin'ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ambaratonga voalohany avy amin'ny sekoly "Villa Maria Cano" ao amin'ny tanànan'i Mosquera Cundinamarca (Kolombia).
Natao tamin'ny hetsika fialam-boly nanentanana ny vahoaka ny olan'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy herisetra ary ny fampahafantarana ny Diabe Iraisam-pirenena faha-2 ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny herisetra.
Avy amin'ny Sekolin'i Gamo Diana - Madrid
Omaly isika dia nankalaza ny Andron'ny fandriampahalemana tany an-tsekoly. Ny ambaratonga tsirairay dia nanao rojo loko iray misy hafatra fandriam-pahalemana sy fitiavana. Tao an-tokotany dia nifamatotra ireo rojo rehetra ary namorona faribolana izahay miaraka amin'ny teny filamatra "Arakaraka ny maha matanjaka antsika".